Saturday October 17, 2015 - 10:40:57 in Wararka by Xarunta Dhexe
Kulanti wacan oo wanaagsan dhamaan aqristeyaasheena sharafta leh kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkenii wargeysyada iyo waxyaabihii ay maanta ooo sabti ah ka qoreen suuqa kale iibisga ciyaartooyda inkastoo uusan dhaweyn xiliga uu furmayo suuqa
Macalinka cusub ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa xarunta tabababarka ee kooxdiisa ka ganaaxay xaasaska ciyaartooyda kooxda, sidoo kale lama saftri doonan ciyartooyda kulmada ay ,artida yihiin.
Xidigii hore ee Arsenal Abou Diaby ayuu markale soo gaaray dhaawac waali ah ka hor inta uusan u ciyaarin Marseille.
Louis van Gaal ayaa kula dardaarmay Wayne Rooney inuu houmar ku sameeyo heerkiisa gooldhalinta ee liita marka ay ka hor imaanayaan kooxdiisa hore ee Everton.
Tony Pulis ayaa ka carooday xiiririka kubada cagta ingiriiiska FA isagoo su’aalo ka keenay ganaaxa waalida ah ee ay macalimiinta duldhigaan.
Macalinka West Ham Slaven Bilic ayaa u sheegay Dimitri Payet inuu iska iloobo in xulka France aysan u yeerin
Gary Neville aya u sheegay Liverpool iney joojiyaan jaceylka Jurgen Klopp shaqadooda kalena ay qabsadaan.
Manchester United maamulaheeda Louis van Gaal ayaa sheegay in xitaa cuno kariyaha kooxda ee Mike uu sameyn ku leeyahay qaab ciyaaredka kooxda.
Jurgen Klopp wuxuu soo gabagabeyn karaa abaarta dhanka koobabka ka heysta Liverpool, sida uu qaba kabtankiisi hore Mats Hummels, furihii kooxdii Klopp ee ku guuleysatay Bundesliga ee Borussia Dortmund, shakina kama qabo in kursiga kulul ee Anfield uu diyaar u yahay haatan koobkoodii 19aad.
Chelsea ayaa fursad siin doonta da’yarka Ruben Loftus-Cheek kulanka Aston Villa bal si loo tijaabiyo hadii uu nasiibkiisa wax ka badali karo natiijo xumada kooxda.
Sky Sports ninka wax ka falaanqeeya ee Jamie Carragher ayaa qaba in xidiga Everton Ross Barkley uu fure u noqon doono hal abuurka xulka England.
Everton ayaa lagu iibsan doonaa £225 milyan oo Ginni, waxaan la wareegi doona ganasato American coo uu hogaaminayo milkiilaha kooxda MLS ee Sporting Kansas City.
Jurgen Klopp shaxdiisa adag lama qabsan doonaan ciyaartooyda Liverpool, laakin da;yarta kooxda ayaa faa’ido weyn ku qabi doona midaas, waxaa sidaasi qaba saaxiibkiisPaul Lambert.